Bloopers | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! Bloopers | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
यो नयाँ अनलाइन छ स्लट एसएमएस भुक्तानी साइट एल्क स्टूडियो द्वारा शुरू. यो चलचित्र-THEMED Bloopers सबै स्मार्ट उपकरणहरूमा प्ले गर्न योग्य छ. को ओर्केस्ट्रल साउन्ड संग, रील सबै फिलिम-सम्बन्धित कल्पना समावेश. यसलाई केही साँच्चै राम्रो बोनस सुविधाहरू प्रदान एक मनोरंजक स्लट खेल हो.
नयाँ स्लट एसएमएस भुक्तानी साइट मा प्ले र जीत
यो स्लट खेल आउँछ5रील,3पङ्क्ति र प्रस्ताव 243 तरिकामा एक जीत छ. राम्रो परिचयात्मक भिडियो अप दृश्य यो स्लट खेलको लागि खेलाडी विभिन्न वर्ण सेट र परिचय पनि छ. खेलाडी £ 0.25 को न्यूनतम शर्त र £ 100.00 को अधिकतम शर्त संग गेमप्लेको सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. यो स्लट एसएमएस भुक्तानी साइट पनि खेलाडी गरेको खम्बा 600x बारेमा को Jackpot प्रदान गर्दछ.
यो नयाँ स्लट एक पुरुष रूपमा उच्च मूल्य प्रतीक र एक महिला नेतृत्व तारा हुन्छन्, फिल्म र क्लापर बोर्ड को रील. अर्कोतर्फ, 10, जे, Q, K, र एक तल्लो मान रूपमा मानिन्छ. जंगली प्रतीक द्वारा जंगली Bloopers लोगो पनि चित्रण गरिएको छ. यो बोनस प्रतीक अलग्गै अन्य सबै प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ. जबकि बोनस प्रतीक तारा 'फेम को वाल्क' छ र यो मुख्य विशेषता ट्रिगर.
स्लट एसएमएस भुक्तानी साइट संग बोनस विशेषताहरु आनन्द
यो नि: शुल्क spins र आधार खेल भित्र अंधाधुंध देखिन्छ. बारेमा छन्5को रील मा लक्षविना हिड्नु र निम्नानुसार पनि मिनी-बोनस इनाम कि फरक Blooper वर्ण:
ध्वनि टेक- यो Blooper को रील मा टाँसिएको wilds स्थानहरू र निःशुल्क स्पिन इनाम दिनुहुन्छ.
नि: शुल्क Spins मा:
स्टन्ट मानिस- यो Blooper को विस्तार wilds मा wilds स्थान्तरण.
कटर- यो Blooper को 'झर्ने प्रतीक' इनाम नयाँ विजेता संयोजन गठन गर्न सक्ने.
मेकअप- यो Blooper अतिरिक्त निःशुल्क spins इनाम दिनुहुन्छ.
ठिक गर- यो Blooper को प्रतीक विजेता संयोजन सिर्जना गर्न वरिपरि उत्प्रेरित गर्छ.
निःशुल्क spins अवतरण द्वारा सक्रिय हुनेछ3वा बढी बोनस बायाँ देखि रील मा सही तारा. ताराहरूको प्रत्येक विशेष Blooper लागि लोगो देखाउने. साथै, निःशुल्क राउन्ड spins समयमा यी सक्रिय हुनेछ.
हर्कुलेसक्लस्टर उच्च र शक्तिशाली